Booliska Hindiya Oo Lagu Wargaliyey In Shaqada Laga Eryidoono Askariga Baruurta Iska Ridi waaya - Wargane News
Home Somali News Booliska Hindiya Oo Lagu Wargaliyey In Shaqada Laga Eryidoono Askariga Baruurta Iska...
Mid ka mid ah madaxda ciidammada booliska dalka Hindiya ayaa waxa uu askartiisa u sheegay in miisaanka ay dhimaan amaba laga joojin doono shaqada ay hayaan.
Taliyaha booliska kaydka ah ee gobolka Karnataka ayaa BBC-da u sheegay inuu ka walaacsan yahay kororka askarka cayilan ee ciidammadiisa ka tirsan.
Bhaskar Rao ayaa intaasi ku daray inuu ga’aankaasi qaatay kaddib markii in ka badan 100 askari ay 18-kii bilood ee ugu dambeeyay u dhinteen cuduro ka dhashay cuntooyinka ay isticmaali jireen iyo qaabkii ay u noolaayeen.
Askarta ayaa laga caawin doonaa sidii ay u badeli lahaayeen cunnooyinka ay cunaan iyo habka ay u nool yihiin.
Booliska keydka ee gobolka Karnataka ayaa waxa ay gaarayaan 1400 oo askari, kuwaas oo badanaa ilaaliya ammaanka xafladaha waa weyn ee gobolkaasi lagu qabto, sidoo kalana waxa ay koontaroolaan xaaladaha sida rabshadaha iyo xiisadaha qalalaasaha wata.
Saraakiisha sarsare ee booliska kaydka ee gobolka Karnataka ayaa waxaa loo sheegay inay askarta ka soo soocaan booliska cayillan, ayna u furaan tababar ay culeyska jirkooda ku dhimayaan.
“Waxaannu bilownay hannaan aannu muddo lix bilood ah kula soconayno sonkortooda iyo arrimaha kale ee caafimaadkooda. Amarkan ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in askarta ay wajihi doonaan in shaqada laga joojiyo ama xilkaba laga tiriyo, taas oo lagu cabsigalinayo askarta aanan ka taxadarin caafimaadkooda,” Mr Rao ayaa sidaasi u sheegay weriye Imran Qureshi oo ka tirsan BBC-da laanteeda Afka Hindiga.
Wax layaab leh ma ahan inaad aragto booliska Hindiya oo dadaal ugu jira sidii uu ku dhimi lahaa cayilka jirkooda.
“18-kii bilood ee ugu dambeeyay, 153 nin ayaa dhimatay. 24 ka mid ah raggaasi waxa ay ku dhinteen shil gaari halka sagaalna ay isdileen. Inta soo hartayse waxa ay u dhinteen cuduro ka dhashay cuntooyinka ay isticmaali jireen iyo qaabkii ay u noolaayeen, sida xanuunka macaanka. Marka tani waa baaqii ugu weynee ee askarta loogu sheegayay in xaaladooda ay wax ka badalaan.” Mr Rao ayaa intaas ku daray.